Shenzhen Joint Technology Co., Ltd yasungulwa ngo 2006, lokuhweba olubhalisiwe 'jointech', futhi formallylisted ebhodini entsha ezintathu ngo-February 2016, ngekhodi isitokwe: 835897.
Inkampani igxile ekuhlinzekeni izingxenye ukuxhumana mobile kwempahla monitoringand ukuphathwa izixazululo, futhi izimisele babe leadingmobile ukuphathwa kwempahla isixazululo abahlinzeki ezimbonini kanye opharetha. Ngemva kweminyaka engu-ofdevelopment futhi inqwaba, inkampani uye wazakhela ephelele isethi ofintelligent hardware kanye mobile ukuphathwa kwempahla software ifu managementplatform, ukuhlinzeka emakethe nge software kanye hardware imikhiqizo namasevisi, okuyinto eziphambili, esisebenzisekayo regardenergy ukusetshenziswa nokuphathwa nokuvikeleka kwempahla njengoba nje nengaphakathi Inani.
ibhizinisi main Thecompany sihlanganisa ukuphathwa kwempahla akude izingxenye ezintathu ezinkulu, kuhlanganise: 1. nokulawula amasevisi imoto futhi petrol inthanethi, izinkampani imoto opharetha ngubani zithinta petrol kanye vehicleposition; 2.The inqubo yonke esitsheni wezimpahla nokulawula, amaklayenti abanale Okukhathaza kakhulu ukuphepha wezimpahla zokuthutha; 3.remotemonitoring kanye nokusebenza amasevisi ukuphithizela kwenethiwekhi, amandla kanye nokukhiqiza powerequipment nokugcina inkampani.
Oholela unjiniyela nge eminyakeni engaphezu kuka-30 nakho ukulawula auto ensimini, R yethu & D Ithimba sihambisane ubuchwepheshe eziphambili kakhulu emhlabeni, futhi zenza imikhiqizo eziningi eziyingqayizivele kanye isofthiwe patent. Umnyango we-R & D Ithimba ziye usebenzelana eduze abalingani kula mazwe 55 kanye nezifunda, futhi wabambisana iziqu nezikhungo kusukela Shenzhen University, etc.Our R & D Ithimba yakhiwa onjiniyela angaphezu kuka-30 no-Senior ne Midlevel ziqu lobuchwepheshe, futhi ihlukaniswe yaba: Hardware iqembu, Software Group, Testing Group, project Group, futhi iqembu ukuhlela project; JOINTECH ziyaqhubeka ziyibeka 8% ~ 15% umthamo wokuthengisa ku-R & D njalo ngonyaka.
JOINTECH uye nokwakha isihambile babuthane umugqa withyearly umthamo 100,000 fuel level izinzwa, wokuqala ozishintshayo ukuhlolwa umshini e China for ngokunemba high uphethiloli ezingeni inzwa ngokuhlolwa umthamo 500pcs ngosuku.